Sharciga Axsaabta Siyaasada Dalka oo dhaqangalay iyo waxqabada dowlada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mogadishu, 10 September 2016 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Madaxweynaha oo Saxiixay Sharciga Axsaabta Siyaasada Dalka, Ciidamada Danab ayaa Horjooge Al-Shabaab iyo 6 maleeshiyaad ah ku dilay Qoryooley, Saldhig cusub oo Booliis ah oo la dhagaxdhigay, Ciidamada XDS oo la wareegey deegaanka Cabdalla Biroole, Soomaaliya iyo Sudan oo kala saxiixday Heshiis Waxbarasho, Dhismayaal Sharci daro ah oo la burburiyey, Ceel Biyood laga hirgelinayo Xarunta Agoonta ee Boondheere, Madaxweynaha oo soo saaray Wareegtada Hab-raaca Shaqada Dowladda ee waqtiyada Doorashada, Shirka Madasha Hoggaanka Qaran (Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada) oo ka furmay Muqdisho 6dii September, Xarun Caafimaad ee deegaanka Kaxda oo la dhagaxdhigay, Arday tababar la xiriira Koontarooka Hawada u ambabaxay Kenya iyo Madaxweynaha Puntland oo Dhagax-dhigay Isbitaalka Gaalkacyo.
Madaxweynaha oo Saxiixay Sharciga Axsaabta Siyaasada Dalka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 5tii September 2016 saxiixay Sharciga Axsaabta Siyaasada Dalka kadib munaasabad Kooban oo lagu qabtay Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya. Munaasabada ayaa waxaa goob joog ka ahaa Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari), Ergeyga Gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabbilsan Soomaaliya Michael Keating, Masuuliyiin ka tirsan labada gole ee Dowladda, iyo Xubno ka socday qaar ka mid ah Xisbiyada Siyaasadeed ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markii uu Saxiixay kaddib ka hadlay Munaasabada ayaa sheegay in sharcigaan uu ka mid yahay Sharciyada ugu Muhiimsan ee dalka. 6-dii Juun 2016 ayay ahayd markii Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay ansixiyeen Sharciga Axsaabta Siyaasada ee Dalka.
Ciidamada Danab ayaa Horjooge Al-Shabaab iyo 6 maleeshiyaad ah ku dilay Qoryooley
Ciiidamada kumaandooska ee DANAB ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ku dileen horjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa degmada Qoryooleey iyo lix maleeshiyo oo la socotay. Afhayeenka Wasaaradda Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen dilka horjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa degmada Qoryooleey iyo maleeshiyaad kale oo la socday, waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay joogteen doonaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, iyadoo falkan u dhacay xilli maleeshiyada ay doonayeen inay u gudbaan dhanka gobolka Shabeelaha dhexe.
Saldhig cusub oo Booliis ah oo la dhagaxdhigay
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed iyo Duqa Magaalada Muqdisho ayaa 7dii September 2016 si wada jir ah u dhagax dhigay saldhig cusub oo uu yeelanaayo degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Dhismaha Saldhigan cusub ayaa waxaa laga hirgaliyay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, waxaana dhismihiisa fududeeyay gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Yusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in dhismaha saldhiga laga fuliyay mashruuca dalkaada dhiso oo ah mashruuc uu maamulka gobolka ugu talo galay horumarinta caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Taliya Ciidamda Boliiska Soomaaliyeed, Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa sheegay in saldhigga cusub uu waxbadan ka badali doono amniga degmada iyo kan gobolka Banaadir, waxa uuna bogaadiyay dadaalka maamulka gobolka Banaadir ee la xiriira dhinaca horumarka iyo amniga.
Ciidamada XDS oo la wareegey deegaanka Cabdalla Biroole
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya oo ay wehliyaan kuwa maamulka Jubbaland iyo AMISOM ayaa la wareegay degaanka Cabdalla Biroole oo 50-KM Koofur Galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Xooggaga wada jira ayaa 7dii September 2016 guluf xooggan kula wareegay Tuuladaasi Bir Cabdalla iyo nawaaxigeed oo ay horay ugu sugnaayeen malleeshiyaad ka tirsan Al-shabaab. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland ayaa horay uga dhawaajiyay iney sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo afjari doonaan Kooxda Al-shabaab, si ay meesha ugu baxaan weerarrada naf la caarinimo ee ay Ummadda ku halligayaan.
Soomaaliya iyo Sudan oo kala saxiixday Heshiis Waxbarasho
Wasiirka Waxbarashada Dowlada Soomaaliya Cabduqaadir Cabi Xaashi ayaa heshiis dhanka waxbarashada ah magaalada Khartuum kula gaaray Drs Sumaya Abuu Kashwah oo ah Wasiirka Waxbarashada ee dalka Sudan. Heshiiska ayaa ujeedkiisu ahaa xoojinta xiriirka wada shaqeyneyd ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan iyadoo deeqaha waxbarasho ee Dowlada Suudaan siiso Soomaaliya sanadkan lagu kordhin doono deeqaha waxbarasho ee Master-ka iyo PHD halka markii hore deeqahaasi ay ku koobnaayeen Bachelor degree. Cabduqaadir Cabdi Xaashi ayaa intaasi sii raaciyay in deeqahan ay ka faa’iidi doonaan kumanaan arday oo aan awoodin in ay sii wataan waxbarashada kala duwan.
Dhismayaal Sharci daro ah oo la burburiyey
Dowladda Hoose ee Xamar ayaa 7dii September 2016 howlo burburin dhismayaal sharcidarro ah ka fulisay magaalada Muqdisho. Ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar oo gacan ka helaya kuwa nabadgelyada ayaa howlgalkan ka fuliyay nawaaxiga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde halkaasoo dhismayaal sharcidarro ah dad ay ka dhisteen. Taliyaha Booliska ee Gobolka Banaadir G/Sare Bishaar Abshir Geeddi ayaa ayaa sheegay in dhulkan uu ahaa hantida dowladda islamarkaana ay dad u dhisteen si sharcidarro ah. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa kula dardaarmay in dadka Soomaliyeed eysan ku fududaanin in hantidooda ay galiyaan dhul sharci daro ah.
Ceel Biyood laga hirgelinayo Xarunta Agoonta ee Boondheere
Gudoomiyaha degmada Boondheere mudane Qaasin C/laahi Xasan oo uu wehliyo ku simaha maamulka xarunta agoonta gabdhaha Boondheere, Sakariye Nuur Abuukar ayaa 7dii September 2016 dhagax dhigay Ceel biyood cusub oo laga qodayo xarunta gabdhaha agoonta Boondheere ee magaalada Muqdisho. Mudane Qaasin C/laahi Xasan ayaa sheegay in qarashka ku baxaya wajiga koobaad ee dhismaha ceelkaasi ay iska kaashadeen maamulka degmada Boondheere iyo kan xarunta agoonta gabdhaha Boondheere. Gudoomiye Qaasin ayaa ku boorriyay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka wax heysta iney ka qeyb qaataan dhameystirka Ceelkaasi, isagoo tilmaamay in ay tahay sadaqo Jaariyo ah.
Madaxweynaha oo soo saaray Wareegtada Hab-raaca Shaqada Dowladda ee waqtiyada Doorashada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa 6dii September 2016 soo saaray wareegto ku saabsan habraaca shaqada dowladda ee waqtiyada doorashada. Wareegtadan aya khuseysa sidii loo ilaalin lahaa hannaanka iyo geedi socodka doorashooyinka, iyadoo la isku diyaarinayo doorashada xildhibaanada labada aqal iyo doorashada Madaxweynaha. Sida ku xusan Dastuurka KMG ee dalka, Madaxweynuhu waa ilaaliyaha midnimada iyo shuruucda waddanka, sidaa darteed iyadoo taasi la eegayo, isla markaana uu Madaxweynuhu tixgelinayo go’aankii Madasha Hoggaanka Qaranka ee 9-kii bishii August, 2016 ayaa waxaa uu soo saaray awaamiirtan aad ka heli karto linkigan.
Shirka Madasha Hoggaanka Qaran (Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada) oo ka furmay Muqdisho 6dii September
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa 6dii September 2016 Xarunta Madaxtooyada si rasmi ah uga furay shirka Madasha Hoggaanka Qaran (Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada) oo ah kii ugu danbeeyey bacdamaa dalka uu galayo doorashooyinka 2016ka. Madaxweynaha ayaa sheegay in shirkan uu muhimad gaar ah leeyahay, maadaama goor dhow si rasmi ah loo gudagalayo doorashada 2016. Shirkan ayaa looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah sida amniga, maalgelinta doorashada iyo imkaaniyaadka kale ee fududeyn kara hawshan. Furitaanka shirkan ayaa waxaa ka qeybgaley Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari, Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka, Maxamed Cumar Carte, Madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Koonfuur Galbeed, Jubbaland, Galmudug, Puntland, wakiilada beesha caalamka iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha Puntland oo Dhagax-dhigay Isbitaalka Gaalkacyo
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay wehelinayaan Madaxweyne ku-xigeenka Eng. Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo Guddoomiye Ku-xigeenka Baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa 5tii September 2016 si wada jir ah u dhagax dhigay dhisme cusub iyo sidoo kale barnaamij dib u dayactir loogu samayn doono cusbitalka guud ee magaalada Gaalkacyo. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirro, Xildhibaanno, maamulka Cusbitalka guud ee Gaalkacyo, guddiga dib u dhiska cusbitalka, saraakiisha ciidanka iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladdda Puntland. Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in ay maanta dhagax dhigayaan barnaamij dib loogu dhisayo cusbitalka guud ee magaalada Gaalkacyo isla markaana dib u dayactir loogu samayn doono qaybaha ka mid ah cusbitalka ee ka badbaadey weerarkii bahalnimo ee argagixisada Al-shabaab ay dhowaan la beegsadeen suuqqa xero dayax iyo xarunta dawladda Hoose oo deris la ah cusbtilka guud ee degmada Gaalkacyo. Dr Cabdiweli ayaa ugu baaqay ganacsadata, Qurbe joogta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo kan Puntland-ba in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga qayb qaataan dib u dhiska cusbitaalka iyo dib u dayactirkiisa.
Arday tababar la xiriira Koontarooka Hawada u ambabaxay Kenya
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Isaaq Cismaan (Fanax) ayaa sheegay in 5tii September 2016 magaalada Muqdisho ay ka ambabaxeen dufcaddii labaad ee arday Soomaaliyeed oo loo tababarayo koontaroolka hawada Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in 30-arday ay ilaa iyo hadda tababar noocan ah u direy, isla markaana dalka Kenya lagu soo barayo qaabkii ay u koontarooli lahaayeen hawada Soomaaliya. Waxaa uu sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in ardaydaasi markii ay dalka dib ugu soo laabtaan in wax badan ay kusoo kordhin doonaan dhinaca koontaroolka hawada Soomaaliya.
Xarun Caafimaad ee deegaanka Kaxda oo la dhagaxdhigay
Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra’isalwasaaraha C/raxmaan Kulmiye Xersi (C/raxmaan Dheere) iyo maamulka Kaxda ayaa dhagaxdhigay xarun caafimaad oo laga hirgelinayo deegaanka Kaxda ee Gobolka Banaadir. Guddoomiyaha Kaxda Maxamed Ismaaciil iyo qeybaha bulshada ayaa ugu mahadceliyey wasiiru-dowlaha agab Isboorti oo uu gaarsiiyey caraartoyda deegaanka iyo dhagax-dhiga isbitaalka. Wasiiru-dowlaha xafiiska Ra’isalwasaaraha Mudane C/raxmaan Dheere ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dhagax-dhigga isbitaalkii ugu horeeyey ee Kaxda.